Iyo 15 Yakanakisa Spy Mitambo, Maererano Metacritic | la-manette.com
Iwo gumi neshanu akanakisa spy mitambo, maererano neMetacritic
8 novembre 2021 ndima Anais Fontaine
Spy yave imwe yemhando dzinonyanya kufarirwa uye dzinozivikanwa dzemitambo yemavhidhiyo mumakumi mashoma apfuura. Heino mitambo yepamusoro yakayerwa neMetacritic.
Stealth uye spy mhando yemavhidhiyo mitambo inowanzo funga zvakanyanya kupfuura yekirasi chiitiko mitambo. Iwo akagadzirirwa kupikisa mutambi nenzira yakasiyana kubva kunoputika uye nekukurumidza paced kupfura mitambo senge Kudevedzwa pabasa uye kunyange Doom.
RELATIVE: Mitambo Yakanakisa paBluestacks Android Emulator: Tamba Nhare Mitambo paPC uye Mac!
Ehe, pane zvakawanda kumutambo une spying-based themes pane kungoshandisa yakanaka stealth mechanics. Zvine zvakawanda zvekuita nenyaya, kuratidzwa uye marongero emutambo.Pamusoro pezvo, nyaya huru dzevasori hadzina kuganhurirwa kungano dzevasori dzakaiswa panguva yeHondo Yemashoko, asi dzinogona kuenderera kune dzimwe nguva nemhando. Ngatitarisei kune gumi emhando yepamusoro spy mitambo.
Yambiro: Isu takangosanganisira iyo yepamusoro-yepamusoro mitambo kubva kune imwe chete franchise kunze kweiyo mitsva yeHitman mitambo sezvo iyi iri reboot ine nhoroondo yakatevedzwa zvishoma iyo chikamu cheiyo trilogy itsva.
Rudzi rwekunyebera rwuri kuramba ruchiwedzera mukurumbira nekuburitswa kwemazita maviri akanakisa mumavhiki ekutanga a2021. Pamusoro pezvo, chiyeuchidzo cheimwe yeanonyanya kudiwa tactical spy uye stealth mitambo yenguva dzese, ichibuda pazvinyaradzo zvemazuva ano, inofanira kutorwa kufunga.
Rudzi urwu runoratidzika kunge rwuri kuwedzera kuva mazita evatambi vakawanda seHood: Outlaws & Legends, uko kubira, kushanda pamwe, uye matekiniki anoita kunge ari pamberi pemakanika emutambo. Far Cry 6 yakarongerwawo kuburitswa gore rino, asi panguva ino. , ngatitarisei mamwe emazita aripo izvozvi.
1. Disjunction (Metascore 72)
Yakaburitswa muna 2021, Disjunction mutambo wekubira wakaiswa mune cyberpunk chiratidzo cheNew York City, pasi pehutongi hwehurumende. Yakagadzirwa nediki yakazvimirira studio inonzi Ape Tribe Games. Ichi chiitiko chekare-chinyakare RPG ine yakanaka yakaderera-yekupedzisira magiraidhi neanhasi zviyero, asi avo vanoda kudarika vanowana imwe yemitambo yakadzika yekubira munguva refu.
Kubva pakuona kwekuona, Disjunction inoyeuchidza zvakanyanya zvechinyakare Metal Gear Solid mitambo paSNES. Nekudaro, RPG mechanics inoiisa parutivi kubva kuMGS yakatevedzana, sezvo vatambi vanogona kuvandudza hunyanzvi uye kusimudzira kwemavara avanodzora. Pamusoro pazvo, vatambi vane sarudzo dzenhaurirano dzine simba guru pamafambiro anoita nyaya.
2. Alpha Protocol (Metascore 72)
Kunyangwe iri iyo yakaderera yakayerwa mutambo pane iyi runyorwa maererano neMetacritic. Alpha Protocol inogona kunge iri yechokwadi yakanyanya spy uye spy ruzivo pane iyi runyorwa. Yakagadzirwa naObsidian uye yakaburitswa muna 2010, mutambo uyu unofemerwa na mafirimu saMission Impossible, James Bond naJason Bourne.
Iyo zano yeAlpha Protocol inopa mutambi mharadzano kuburikidza nemutambo nekuda kweiyo dialogue system. Vatambi vanogona kusarudza kuita zvehasha, manyemwe, kana nyanzvi, izvo zvinoguma nemhedzisiro dzakasiyana mutambo uchienderera mberi.
3. The Operative: Hapana Anorarama Nokusingaperi 2 (Metascore 79)
Kufanana neyakatangira, Iyo Inoshanda: Hapana Mumwe Anorarama Nokusingaperi 2 rurimi-mu-dama mutero kune ekare James Bond mafirimu uye TV akateedzana seThe Avengers. Yakabudiswa muna 2000 PC, mutambo wakawana zvinokatyamadza makumi mapfumbamwe nerimwe paMetacritic, asi yakashata PS91 chiteshi che2 yakangowana makumi matanhatu nenomwe, iyo yakaunza zvibodzwa zvayo pasi. Naizvozvo, vatambi vanofanirwa kungotarisa kuPC vhezheni kana vachida kuona mutambo unonakidza musori.
Verenga zvakare: Maitiro ekubatanidza iyo Recalbox kune yako Ps4 controller?
Uyu mutambo wekusora, wakagadzwa muma1960, unoisa vatambi mushangu dzemutambi anonzi Cate Archer, akagadzirwa kuti ave mukadzi akaenzana naJames Bond. Zvakafanana ne007, Archer anoshandisa akasiyana majeti, zvombo uye matekiniki ekunyebera kuti apedze misheni yake mune iyi dhizaini yepasirese.
4. Invisible, Inc. (Metascore 82)
Yakaburitswa muna 2015 paPlayStation 4 uye mafomati ePC, uyezve muna 2016 pamidziyo yeIOS, Invisible, Inc. ishanduko-yakavakirwa stealth maindasitiri spy mutambo umo mutambi anopihwa basa rekuita mishini yakavanzika nenhanho imwe.
Yakagadzirwa nechikwata chimwechete chakagadzira Mako yeNinja uye Shank, Invisible, Inc. ine mechanics akafanana kune XCOM akatevedzana, asi mishoni, mabasa, uye marongero zvese zvinogadzirwa nenzira. Naizvozvo, mutambo wega wega unopa vatambi huwandu hunoshamisa hwekudzokororwa.
5. Shadow Tactics: Mablades Of The Shogun (Metascore 85)
Shadow Tactics: Blades Of The Shogun yakaburitswa mu2016 yePlayStation 4, Xbox One, uye PC. Mutambo wehunyanzvi hwenguva-yenguva apo mutambi anotora hutungamiri hwechikwata chemhondi muJapan feudal mishini yevasori nekuuraya.
Basa rega rega rinofanira kutariswa se dambanemazwi nemaitiro anoshanda zvakafanana kune Commandos akatevedzana. Pamusoro pezvo, Shadow Tactics zvakare ine nyaya huru ine mavara asingakanganwike anofambisa zano kumberi. Inonyanya kuregerera kupfuura mimwe mitambo yemaitiro akafanana nekuti inobvumira vatambi kuti vafare.
6. Hitman 2: Silent Assassin (Metascore 87)
Hitman 2: Silent Assassin ndiyo yakanyanya kuyerwa mutambo munhevedzano maererano neMetacritic. Uyu mutambo wakanakisa, wakakura zvakanyanya kupfuura wakautangira, uye wakateya nheyo dzemakanika eiyo nhevedzano yeramangwana, nekuunzwa kwekuzvivanza uye dhizaini yemazinga akavhurika.
RELATIVE: 35 inofanirwa-kuva nemitambo yekutamba kana wakanamatira kumba
Iyo ichangobva kuburitswa Hitman uye Hitman 2 yePlayStation 4, Xbox One, uye PC akateedzana prequels / twists anodzokera kumidzi yezvakaita Silent Assassin yakanaka. Asi neyakakwenenzverwa mutambo wemitambo, nharaunda dzakakura, uye inoita seisinga peri nhamba yenzira dzekuzadzisa zvinangwa zvemishini.
7. Commandos 2: Varume Veushingi (Metascore 87)
Yakatanga kuburitswa muna 2001 yePC, Xbox, uye PlayStation 2, Commandos 2: Varume Veushingi inguva chaiyo-yenguva tactical spy game yakaiswa panguva yezviitiko zveHondo Yenyika II. Yakadzokororwa uye yakaburitswa zvakare muna 2020 yePC, Nintendo Chinja, PlayStation 4, uye Xbox One.
Iwo mutambo wakaoma unoisa vatambi mukutungamira kwechikwata chevakuru vecommandos vakapinda muNazi Germany uye vanofanirwa kuita misheni yakavanzika kuseri kwemitsara yevavengi. Kunyangwe neichi chiyeuchidzo, Commandos 2 iri kuratidza zera rayo zvishoma, asi inoramba iri imwe yeakanakisa stealth tactical zviitiko.
Verenga zvakare: 18 Akanakisa Android TV Mabhokisi muna 2020 [Kutenga Gwaro]
8. Hitman 3 (Metascore 87)
Hitman 3 ihope dzese dzespy uye spy fan dzinoitika.
Yakaburitswa muna 2021, Hitman 3 ndiyo chitsauko chekupedzisira muNyika yeAssassination trilogy uye zvine nharo yakanakisa kusvika parizvino. Pesvedzero kubva kuna James Bond uye Mission Impossible yagara yakasimba munhevedzano, asi Hitman 3 inotaridzika senge inofanotungamira kune rinotevera remugadziri zita rakakura, Project 007.
RELATIVE: Fallout 4: 10 Mazai eIsita Aunogona kunge Wapotsa.
Iyo jecha dhizaini yedanho rega rega inobvumira vatambi kuti vagone nzira dzakasiyana siyana dzekudzikisa chinangwa chavo vachishandisa disguise, tsaona dzezvakatipoteredza, pfuti dze sniper, nezvimwewo. Kupfuura zvese, vatambi vane mazita ekare vanogona kumisa Legacy Missions muHitman 3. Haisi chete mitambo yese mitatu iri musumbu rimwe chete, mamisheni echikuru anobatsirwa kubva kumutambo mutsva wekuona uye michina inonatsiridza.
9. Kusaremekedzwa (Metascore 89)
Dishonored yakatanga kuburitswa muna 2012 paPlayStation 3, Xbox One, uye PC. Yakadzokororwa uye yakaburitswa zvakare paPlayStation 4 uye Xbox One muna 2015, kusanganisira ese akamboburitswa DLC mupakeji rimwe.
RELATIVE: Yakanakisa Xbox One mitambo ye2021 (uye kupfuura)
Kusaremekedzwa uye kutevedzana kwayo Dishonored 2 inopa vatambi rusununguko rusingaperi nenyika ine hungwaru hwakagadzirwa uye mazinga. Iko kugona kupinza, kuongorora, ruzivo, uye kushandisa nharaunda yemunhu kunopa vatambi chimwe chezvakasarudzika zvekubira zviitiko kunze uko.
10. Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut (Metascore 91)
Yakaburitswa muna 2011 yePlayStation 3, Xbox 360 uye PC, Deus Ex: Chimurenga chevanhu chiitiko chakabira-RPG mutambo wakaiswa mune ramangwana cyberpunk nyika. Vatambi vanotora kutonga kwemunhu anonzi Adam Jenson, mumiririri akasimudzirwa neCyber ​​​​Augmentation.
Iyo mishoni uye dhizaini dhizaini yakanaka uye inopa vatambi zvakawanda sarudzo uye mikana yeespionage, kuunganidza ruzivo, kuparadza, uye kuba. Vatambi vanogona kutora nzira isingauraye kana kubata yavo vavengi semhondi isina tsitsi inoshandisa midziyo yese yavainayo. Kutenda kune yakavhurika gameplay, Deus Ex: Human Revolution inopa akawanda mikana yekudzokorodza.
11. Mudziyo 6 (Metascore 92)
Chishandiso chakanakisa spy thriller
Yakaburitswa paIOS masisitimu muna 2013, Chishandiso 6 mutambo-wakavakirwa papuzzle mutambo umo protagonist Anna anoedza kutiza kubva kuchitsuwa chejeri. Iyo nyaya inoita seinodhirowa zvakanyanya kubva kuma1960s British TV akatevedzana Musungwa mune toni uye zvirongwa zvekuronga.
Kunyangwe iyo mhando ine zvisingakwanisi kana zvichienzaniswa neazvino manovhero ekuona uye graphical adventure mitambo, iyi yakangwara-yakavakirwa mameseji mutambo unotora mukana wakazara wehardware yepuratifomu yeIOS kugadzira chimwe chinhu chakasiyana uye chinonakidza.
12. Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory (Metascore 94)
Yakagadzirwa semukwikwidzi ane chokwadi kune Konami's Metal Gear Solid franchise, iyo Splinter Cell yakatevedzana yakakurumidza kuve imwe yeakanakisa stealth spy zviitiko. Splinter Cell: Chaos Theory inowanzoonekwa seyakanakisa mutambo munhevedzano, iyo inoratidzwa muMetascore yayo.
Verenga zvakare: Iwo akanakisa 360 makamera: pfura panorama, 360 mavhidhiyo, selfies uye nezvimwe.
RELATIVE: GTA 5 cheats: Rondedzero yekubiridzira PS4, Xbox, PC uye maitiro ekupinda ese cheats, makodhi efoni uye console mirairo.
Graphics uye kugadzirwa kwemaodhiyo zvichiri kusimba mushure memakore gumi nemashanu uye iyo nyaya ndiyo yakanyanya kunaka munhevedzano. Nyaya ndiyo yakanyanya kunaka pane dzakatevedzana. Iri mumhepo uye inoyevedza, uye vatambi havagone kubatsira asi kukweverwa munyika yayo yekurangana uye espionage.
13. Metal Gear Solid 2: Sons Of Liberty (Metascore 96)
Metal Gear Solid 2: Vanakomana VeRusununguko vakatanga kuburitswa paPlayStation 2 muna 2001 uye yakawedzera vhezheni yemutambo yakatevera gore rakatevera neMetal Gear Solid 2: Chinhu. Kufanana neyakatangira, Metal Gear Solid 2 ndeyepamusoro-tech spy inonakidza ine sci-fi twist.
RELATIVE: Iwo makumi matatu nemaviri mavhidhiyo anonyanya kufarirwa paYouTube - Despacito munzvimbo yekutanga
Zviri zvakare mumwe mitambo yokutanga muunyanzvi Genre kupa vatambi nzira isingaurayiwi, pasinei kuva vakapakata siyana maturusi uye nzira kuuraya vavengi vavo. Kunyangwe iwe uchitamba seNyoka muchirevo kana kuti Raiden kwemutambo wasara, MGS2 inorarama zvinoenderana nedikita rayo "Tactical Spy Action" ine matani emitambo yemitambo mechanics aita kuti ive bhenji pamutambo. kuba uye husori kwemakore anouya .
14. Goldeneye 007 (Metascore 96)
Yakaburitswa chete Nintendo 64 muna 1997, Goldeneye 007 yaive uye ichiri kutorwa seyakanakisa James Bond mutambo wakamboitwa. Yakapa vatambi sarudzo yekupinda muchiito nekuputika kwakazara kana kushandisa yakanakisa stealth maitiro.
Izvi zvakaitwa kuti zvikwanisike nekugadzirwa kwakajeka kwematanho uye nekuwedzera matambudziko mumazinga epamusoro ekuoma. Pamusoro pezvo, mutambo uyu wakatevera mamiriro emufirimu wawakafemerwa uye wakaita kuti vatambi vanzwe seyekupedzisira mumiriri wekuvanzika.
16. Rima Rakanaka (Metascore 97)
Yakaburitswa muna 2000, Perfect Rima ndeimwe yakasarudzika yakagadziridzwa neRare yeNintendo 64. Ndiyo mutsivi wemweya weGoldeneye 007, iyo inotora yakawanda yemaitiro. Asina rezinesi reJames Bond, mutambi mutsva Joanna Dark aive neshangu hombe dzekuzadza, asi Rare akaita basa rakanaka kwazvo rekumuita anofananidzira mune itsva sci-fi storyline.
Rare vakaratidza hunyanzvi hwavo mukugadzira mishoni dzakanyatsogadzirwa uye mazinga kuti vatambi vatore nzira yavanoona yakakodzera. Kuronga kwemutambo kunoratidzika kunge kukweva kurudziro kubva kune vese James Bond uye Iyo X-Mafaira, ine rondedzero yakanangana nekurangana kwevatorwa.
Mushure meKudonha: Inounza imwe nhanho yemhirizhonga uye gore rinotyisa VR. - Zvita 30, 2021
Rondedzero yeIron Saga mazinga
Final Fantasy 7: Murwi Wekutanga achaburitswa nekukurumidza kupfuura zvaitarisirwa.